ရုရှား−တရုတ် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးက အခြားမည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ရန်မဟုတ်ဟု သမ္မတပူတင်ပြော - Xinhua News Agency
မော်စကို ၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှား-တရုတ် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသည် အခြားမည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ရန်မဟုတ်ကြောင်း နှင့် နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်က ဆိုချီမြို့(Sochi) ၌ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။“ ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေဖွဲ့တာဟာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အခြားဘယ်နိုင်ငံကိုမျှ တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ရုရှားနိုင်ငံ၏ think tank ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် Valdai Discussion Club ၏ ၁၈ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစီးအဝေး၏ မျက်နှာစုံညီအစီးအဝေးတွင် သမ္မတပူတင်က မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ (NATO) နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မတူညီတာက ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်လိုနီးစပ်မှုရှိတဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ကိုမှ မကြိုးစားခဲ့ခြင်းပါပဲ။ ရုရှားနဲ့တရုတ်ကြားမှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမျိုး မရှိပါဘူး ။ အဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးလည်း ကျွန်တော်တို့မှာမရှိပါဘူး ” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Valdai Discussion Club ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ၁၈ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစီးအဝေးကို ဆိုချီမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အစီးအဝေးဆောင်ပုဒ်မှာ “ ၂၁ ရာစုတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ခတ်မှု : နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ ၊ တန်ဖိုးများ နှင့် နိုင်ငံတော် ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
Valdai Discussion Club အဖွဲ့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှ တက်ရောက်လာသူများသည် ချက်ချင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှုထောင့်မျိုးစုံဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
MOSCOW, Oct. 21 (Xinhua) — Russia-China relations are “not directed against anyone” and are in the interests of both countries, Russian President Vladimir Putin said Thursday in Sochi.
“We talked about this many times. We are friends with China in each other’s interests, and (our relations) are not directed against anyone,” the president said at the plenary session of the 18th annual meeting of the Valdai Discussion Club,aRussian think tank.
“Unlike NATO countries, we are not trying to form any closed military alliance, there is no military bloc between Russia and China. We have no such intention,” he added.
The 18th meeting of the Valdai Discussion Club took place in Sochi from Monday to Thursday. This year’s theme is “Global Shake-Up in the 21st Century: The Individual, Values, and the State.”
The Valdai Discussion Club was established in 2004 and unites experts, politicians and public figures from all over the world. International participants traditionally discuss urgent global matters inawide array of fields.
The national flags of China and Russia are seen on Red Square, Moscow.